Melt Blowing Equipment Production Line-AbaThengi base China batyalela ukuvelisa izixhobo
Melt Blowing Equipment Production Line
Umnxeba we-Elevator Escalator weTooling
Isakhelo senkxaso ye-Escalator
Iphaneli esetyenziswa kwicala lokuqhutywa kweendibano
Escalator isixhobo sendibano
Umfanekiso wesixhobo se-Escalator
I-1,2m inyibilikisiwe umtya welaphu
I-1.6m inyibilikisiwe umaleko welaphu
Isasazi sentloko esongwayo
Intshayelelo ye-Genera * Lo mgca wemveliso uquka isikroba esinye sokususa, ukunyibilikiswa komkhenkce wangaphandle, ibhanti yokuhambisa, umatshini wokuphephetha ... njl. * Igcwele ngokuzenzekelayo ukusuka ekutyeni ngezinto ezibonakalayo ukuya ekunyibilikeni kwelaphu lokugqibela lokuqengqa, itekhnoloji evuthiweyo, ukuqhuba okuzinzileyo, iPFE inokufikelela kuma-95 nangaphezulu. * Umthamo wokuvelisa ukusuka kwi-1500kg, owona mveliso ngqo uxhomekeka kumatshini ongezelelweyo kwaye unyibilikisiwe ubungakanani bokubumba. Ubungakanani beParadise 1.Model: HL-1600 2. Uhlobo lwemveliso: Ibinzana elime nkqo ukuya ezantsi 3.Voltag ...
Inaliti ethe ngqo ethembekileyo kunye nokubuyisela imigca yemveliso ye-meltblown kubathengi ngokubalula ukusukela kuma-400mm-1600mm. Umgca wokuvelisa odala ungasetyenziselwa ukwenza imveliso ye-meltblown kuphela, kodwa nakwimveliso yezixhobo zokucoca ulwelo nezixhobo zokucoca umoya. Izixhobo zokucoca ulwelo zisetyenziswa ikakhulu kwimihlaba yonyango lwamanzi, ipetroli necandelo lemichiza, ngesakhiwo esifanayo, ukuchaneka kokucokiswa kwezinto ezilungileyo, isiphumo esibonakalayo, kunye nokuqina ...
Esona sixhobo siluncedo sokunyibilikisa kunye nokutshiza kwemveliso yokucoca ilitha lokucoca intloko. Emva kokuvelisa kangangexesha elithile, ukungcola kwenkqubo yokuxovula kuya kwenzeka. Ngeli xesha, kuyimfuneko ukufaka endaweni yokutofa okunyibilikayo. Intloko yokufa inaliti yokufakelwa endaweni kufuneka idutyulwe ukuze isuse i-polymer eseleyo kunye nokungcola kwentloko efayo. Isikere kunye ne-spinneret zihlala zivuthisiwe ukususa i-polymer eyintsalela kunye nokungcola. Kwaye izinto ezingavuthiyo zonyibilike -...
400-600 Umaleko wengubo elungiselelwe umaleko
Akukho 10 yeHanma Road, Idolophu yaseLinpu, isithili seXiaoshan, iShangzhou
INkomfa eNcumileyo yabasebenzi ...
Siyavuyisana kwiwebhusayithi entsha kaHan ...
iveliso ezifakiwe - Imephu